Alshabaab Lagu soo qabtayhowl-galkii ay NISA ka fulisay degmooyin ka mid ah Muqdisho? | Entertainment and News Site
Home » News » Alshabaab Lagu soo qabtayhowl-galkii ay NISA ka fulisay degmooyin ka mid ah Muqdisho?
Alshabaab Lagu soo qabtayhowl-galkii ay NISA ka fulisay degmooyin ka mid ah Muqdisho?
daajis.com:-Ciidanka NISA, gaar ahaan kuwa Duufaan ayaa howl-galo ballaaran oo saacadihii lasoo dhaafay ay ka sameeyen qaar kamid ah degmooyinka Howl-wadaag, Yaqshiid iyo deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Magaalada Muqdisho, ayaa waxay soo qabteen Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiisha Shabaabka ah ee ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada Duufaan ayaa waxay tiradooda d hameyd saddex ruux, waxayna ku sugnaayeen deegaanka Ceelasha Biyaha.
Hogaanka Ciidamada si faah-faahsan ugama hadal magacyada Saraakiisha Shabaabka ah ee lagu soo qabtay howl-galada ay fuliyeen ciidamada Duufaan, lamana soo bandhigin sawiradooda.
Sidoo kale waxay sheegeen in Ciidamada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA ay markasta u taagan yihiin sidii ay u sugi lahaayeen amniga shacabka Soomaaliyeed iyo midka caasimaddaba.
Howl-galkan ayaa daba socda howl-galo ay labo maalmood ka hor isla ciidamada Duufaan ka fuliyeen xaafada Oodweyne ee degmada Deyniile, taasi oo lagu soo saaray miinooyin la sheegay in Al-Shabaab ay ku aaseen qeybo ka mid ah xaafadaas.
Ciidamada amaanka iyo kuwa NISA ayaa habeenadii u dambeeyay howl-galo lagu xaqiijinayo amaanka caasimada ka fuliyay degmooyinka gobolka Banaadir, oo muddooyinkii dambe uu sii xumaanayey amaankeedu.
Posted by Bulsha Arrimaha Bulshada, Published at 22:38 and have